Soomaalida oo ugu badan dadka Sweden iska dhiibay sanadkaan | Somaliska
Soomaalida ayaa u muuqata in ay yihiin dadka ugu badan ee sanadkaan magangalyada ka dalbaday Sweden sida ku cad macluumaadka Laanta Socdaalka. Ka soo biloow bishii Janaayo ee sanadkaan ilaa bisha May, ayaa waxaa isdhiibay 2151 qof oo Soomaali ah oo ay soo raacaan Afghanistan oo iyaguna gaaraya 1693. Tirada Soomaalida ayaa u muuqata mid aad kor ugu kacday marka loo barbar dhigo sanadkii hore oo isla xiligaas oo kale ay isdhiibeen 1316 qof. Sababta ka dambeysa siyaadada soomaalida ayaan la qiyaasi karin. Dhinaca kale, markii aan isku dayay in aan ogaado tirada dadka sharciga ku helay dacwada ayaysan Laanta Socdaalku si fiican u cadeyn tiradooda balse macluumaadkooda waxaa ku qoran in sanadkii 2011 ay 137 qof oo Soomaali ah sharciga ku qaateen xiriir qaraabo. Halka sanadkaan tiradaas ay gaareyso 48 qof. Ma kala cada in dadkaas laga soo qaaday wadanka dibadiisa iyo in halkaan ay iska dhiibeen ka dibna qaraabadooda lala mideeyay. iyo xitaa in ay yihiin dadka xeryaha qaxootiga laga soo qaaday oo qaraabadooda lala mideeyay. Sidoo kale Sweden ayaa sanadkaan socda waxay xeryaha qaxootiga ka soo qaaday Soomaali gaareysa 186 qof, halka tiradaas ay sanadkii 2011 ahayd 238 qof.
Soomaalida ayaa u muuqata in ay yihiin dadka ugu badan ee sanadkaan magangalyada ka dalbaday Sweden sida ku cad macluumaadka Laanta Socdaalka.
Ka soo biloow bishii Janaayo ee sanadkaan ilaa bisha May, ayaa waxaa isdhiibay 2151 qof oo Soomaali ah oo ay soo raacaan Afghanistan oo iyaguna gaaraya 1693. Tirada Soomaalida ayaa u muuqata mid aad kor ugu kacday marka loo barbar dhigo sanadkii hore oo isla xiligaas oo kale ay isdhiibeen 1316 qof.
Sababta ka dambeysa siyaadada soomaalida ayaan la qiyaasi karin. Dhinaca kale, markii aan isku dayay in aan ogaado tirada dadka sharciga ku helay dacwada ayaysan Laanta Socdaalku si fiican u cadeyn tiradooda balse macluumaadkooda waxaa ku qoran in sanadkii 2011 ay 137 qof oo Soomaali ah sharciga ku qaateen xiriir qaraabo. Halka sanadkaan tiradaas ay gaareyso 48 qof. Ma kala cada in dadkaas laga soo qaaday wadanka dibadiisa iyo in halkaan ay iska dhiibeen ka dibna qaraabadooda lala mideeyay. iyo xitaa in ay yihiin dadka xeryaha qaxootiga laga soo qaaday oo qaraabadooda lala mideeyay.
Sidoo kale Sweden ayaa sanadkaan socda waxay xeryaha qaxootiga ka soo qaaday Soomaali gaareysa 186 qof, halka tiradaas ay sanadkii 2011 ahayd 238 qof.
Soomaalida oo ugu badan dadka Sweden iska dhiibay
saaxiib cunwaanada, mowduucyadaada waa muhim ee sax inta aadan soo gelin.
Ma isla sanadkan ayaa wax isbedelaan Jimcaale sowtii Afgaanistaantu badneyd warbixintii hore Migrationsverketka sida aad adiguba horey u sheegtay???
FM: Warbixintaas waxay ku saabsaneyd sanadkii hore iyo caruurta aan la wehlin. Warbixintaan waxay ku saabsantahay sanadkaan Januari ilaa Maj.
sxb dhanka walidka maxey ka dhehen dacwada sida qoysaska la midiyen dono sida aabaha amo hooyada lo dacwoday mahadsanid
Insha alah kuwa sanadka dhamadkisa imanaya aya kabadan kuwa hada isdhibay
Waxan qabaa in Dalku markan rajo weyn uu leeyahay Barke Rururadi Hogaamiye Dinneydka ahaa Halki Gabaadka u ahaa Iminkada Weyka Huleelen Marka Dalka Xal weyn Ayaa Lo,helaya Dhamaantis
aad baan urajaynaaya inaan sanadkan gudihiisa kamid noqdo kuwa taga swedan soo duceeya mustaqbal wanaag san
WIIL XAMAR says:
ASCaqayaahta waxaa sax ah in dadki MIDEYNTA WAA SOO BILOWDEEN DAD KA YIMID ADIS AYAA YIMAADEEN jönköpin iyo katrineholm waa sax ee in ta maqan RABI ha u soo fududeeyo in sha aalllahu wadan keenana dad ka dhib ka ku haya oo laga soo kala cararay Rabi ha ka qabto oo markii ay wadan ka joogaan Libaxa ah markii ay qurbaha yimaadaana Bisada ka miskiinsan